होल नार्इट (कथा)
Posted by Unknown May 01, 2013
उसको सरल जवाफ पाएँ – “बि.ए. सेकेन्ड यार ।”
“सानो काम ?” मैले आश्चर्यता प्रकट गरेँ । किनकी, मलाई अचम्म लाग्नुको कारण मलाई जान्नु थियो त्यो कस्तो सानो काम हो जसले यत्रा धेरै मान्छेको खर्च पुर्‍याउन सकोस् !
खासमा अघिदेखि मलाई खसखस लागेको उसको कामको विषयले निकैबेर घोत्लिन विवश बनाउँदै थियो । त्यहि खसखसका बीच मैले सोधेँ पनि –“यस्तो गरिरहेकोमा रिग्रेट फिल हुँदैन हजुरलाई ?” मेरो छुच्चो प्रश्नमा थोरै आवेशात्मक जवाफ दिदै भनी – “ह्वाट द फक रिग्रेट इज ? अनि मैले किन रिग्रेट फिल गर्नुपर्‍यो ?” चालिस पार गरिसकेको जस्तो लाग्ने ट्याक्सी चालकले हामीतिर एकदम कुटनैतिक नजर लगायो । मलाई थोरै असहज महशुस भो ।
“हजुरलाई हर्ट गरे हैं ? माफ गर्नु ल मलाई । एम सरी ल!” गल्तीगरेपछि म सधैं यस्तै विनित भावमा प्रस्तुत हुन्छु । धेरैले भन्ने गरेका पनि छन्, माफी माग्दै गर्दाको क्षण म निकै नै मायालाग्दो रुपमा प्रस्तुत हुन्छु । उसले पनि मेरो टिठलाग्दो भावलाई देखेरै नै माफ गरेको हुनुपर्छ, भनी – “हैन हैन इट्स ओके । हजुर मात्र हैन, धेरै भद्र मान्छेहरुलाई जब म मेरा सत्यताहरु लुकाउँदिन उनीहरुका प्रश्नहरु हजुरकै जस्तै हुन्छन् – तिमीलाई रिग्रेट फिल हुँदैन ?”
उसले चालकलाई आग्रह गर्दै भनिनँ – “दाई, भोलुम अलि सानो पार्नु न !” ड्राइभरले त्यसै गर्‍यो ।
अनि म तिर पुलुक्क हेर्दै उसले भनी –“लौ, चिया हेर्नु है त, उम्लेला नी ! म बाहिर सरकारी धाराको पानी लिएर आउँछु ।” ठ्याक्कै देवकी भाउजूले रामुदाईलाई अर्‍हाए झैं उसले मलाई काम लगाई । मलाई अप्ठेरो लाग्यो ।
हाम्रो चिया गफगाफ शुरु भो । उसले चिया पिउने क्रममै आलु ताछ्ने र काउली केलाउने काम समेत भ्याई । इन्भर्टरको उज्यालोमा उसको मुहार चम्किरहेको मैले राम्ररी नै देख्न पाएँ । उसले थाहा नपाउने गरी एकटक मैले उसलाई हेरिरहेँ । बिचबिचमा उसले मेरा ब्यक्तिगत कुराहरु सोधी । मैले कुरा नलुकाई खुलस्त पारिदिएँ । सोधेकी थिई – घरमा कोको हुनुहुन्छ ? भनेँ – एक्लो छोरो हुँ । अनि सोधी – बुबा आमा के गर्नुहुन्छ ? भनेँ – बुबा मालअड्डामा काम गर्नुहुन्छ, आमा नि.मा.वि. स्कुलको शिक्षिका हुनुहुन्छ । र, उसले अलिकति असहज लाग्ने कुरो पनि अरी – “हजुर ब्याचलर मात्र कि भर्जिन पनि ?” उसको यो प्रश्नले म एकदम सन्न भएँ । झन प्रश्न गरेपछि उसले यति कामुक तरिकाले आँखा सन्काई कि लाग्यो – केहि नसोचेर गर्लम्मै अङगालो हालूँ ! मैले केहि पनि बोलिनँ, र उसले पनि फेरि दोहोर्‍याएर सोधीने । गधापच्चिसे काट्दै गरेको लक्का जवानले अझै भर्जिनिटी गुमाएको छैन भन्नु, न उसले पत्याउने कुरो थियो न मेरो लागि खास गर्व गर्न लायकको कुरो नै । मनमन पनि यस्तो पनि लाग्यो – मोरीले फेरि नपुङ्शक ठानेर खाना पनि नखुवाई घर पठाउली ! त्यसकारण पनि मैले चुपचाप बस्नु मै उचीत ठानेँ ।
उसले गोलभेडाको चटनी पनि बनाई । उसको भर्भराउँदो वैंश भन्दा कमको देखिएन चटनी । मलाई चखाई पनि । चाखेको स्वादिलो रहिछ ! केहिबेरपछि खाना पस्की दुवैजनालाई, दालचाँहि बिहानको थियो र उसले तताएकी पनि थिई । उसले तयार पारेको खानाको पहिलो गाँस मुखमा पुर्‍याउँदै थिएँ, ऊ केही सम्झे झैं गरी, ग्यासचूल्होबाट बायाँपट्टि तीन हातपरको सानो दराज राखेको ठाउँमा पुगी अनि दराज खोली ।
अब चाँहि मैले केहि बोलिनँ । ऊ भुँइमा विछ्यौना बनाउँदै थिई । मैले मेरो ल्यापटप खोलेँ र वर्ल्डलिङ्कको मेरो वाईफाईबाट नेट सर्फिङ गर्न थालेँ । बिछ्यौना मिलाईसकेपछि ऊ मसँगैको खाटमा बस्न आई र अनुरोध गरी – “नेट कनेक्सन छ भने दिनुन, कत्ति भो साइबर गएर फेसबुक नचलाएको । यो मोबाइलमा भनेजस्तो मजै नहुने । अनि साँच्ची हामी पनि फेसबुकमा साथी बनौं न ।”
मैले फेरि मोबाईलामा नजर पुर्‍याएँ । २ बजिसकेको थियो । भनेँ – “हैन, अब त सुत्नुपर्ला !”
“यसो आँखा लगाउनु न ऊ त्यही कुनामा छ त । यो एट्याच रुम हो ।” अझ झन मलाई बिल्लाउँदै भनी – “पिसाव लाग्यो कि ...?” म चर्पीको ढोकामा नपुगिन्जेल उसको हाँसो थामिएन ।
म चर्पीबाट बाहिर निस्केपछि उसले बत्ती निभाउन अर्‍हाई । मैले सोही बमोजिम गरेँ । ल्यापटपको स्क्रिनमा चर्चीत नायिकाको एकदम नीजि कार्यालापहरु चलायमान भैरहेथे । उसले खुब सन्तुष्टि मानेर हेर्दै थिई । मैलेपनि उसँगै हेरेँ । स्क्रिनमा त्यो दृश्य चलिरहँदा त्यसको प्रभाव विस्तारै मुस्ताङचोकसम्म आईपुग्यो । ५ मिनेटको गल्लीहुँदै त्यो भान्छा अनि हामी दुई जवान युवायुवती बसेको ठाउँसम्म आईपुग्यो ।
मैले यसलाई पढे धेरै पढे तर मैले किन किन राम्रो संग बुझ्न नसकेकै हो त तर समग्रमा उत्कृष्ठ छ । साहेद क्रमशः भएको हुँदा पुरै भाग नहेरेकोले होला अलिकति कन्फ्युज भएको ।
निकै राम्रो छ् यहाँ सम्मा अनी कती बेला अर्को भाग पढु पढु भैरहेको च् पिलिज छिट्टै पोस्ट गर्नुहोला मेरो कमेन्ट पनि क्रमश :
raamro sir baaki ansa rakhidinu chhittai
कथा को पहिलो भाग रहेछ सर निकै मिठो सुरुवात छ अनि त्यो मोरो नि कर्लगर्ल को पछि पछि लगिपो हालेछ मोराले के .....अब
Nirajan Thapa said…
दोश्रो भाग पनि हेरेर मन परार्इदिनुभो भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।
Ramro Layo... ma aru pani padhne chhu... Lekhak sanga parichaya paye hune...
Dherai ramro6sir . Go ahead.
no word to explain. मर्मस्पर्शी कथा,
डिभिजन ३ फाइनल हाइलाइटस
आमा महान छिन् उनलाई नबिर्स !
“दाई, मलाई निको भयो नी !”
appointment at Finnish Police1
book your time at Finnish Police1
How to book time for appointment at finnish police station1
बिद्यादेवी भण्डारी; नेपाली राजनिती;1